သူများထက်စောတဲ့အင်ဒိုနီးရှားကသင်္ကြန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Cultures » သူများထက်စောတဲ့အင်ဒိုနီးရှားကသင်္ကြန်	15
Posted by Kyaemon on Mar 11, 2015 in Cultures, Education, Entertainment, History, Photography, Society & Lifestyle, Travel | 15 comments
အိန္ဒိယ က သင်္ကြန် စောမယ်လို့ထင်ခဲ့တာ မမှန်ပါ၊
အိန္ဒိယ ဟိန္ဒူဓလေ့ က ပွါးတာဖြစ်ပေမဲ့
Sumatra စူမတ်တရာ ကျွန်းကြီး အလယ်မြောက်ပိုင်း ကပါ၊ Selat Panjang စလတ် ပန်ကျန်မြို့ Meranti Island မရန်တီ ကျွန်းကလေးRiau ရဩ ပြည်နယ် အနီးတဝိုက်
နေ တရုပ်နွယ်ဘွား တို့တရုပ်နှစ်သစ်ကူးရင်း သင်္ကြန်ရေပက်မင်္ဂလာပွဲပါကျင်းပ
အင်ဒိုနီးရှား သမတ ဂျိုကိုဝီ စိုက်ကားစီး
Alinsett@Maung Thura says: ​အော်​ ဘာလိုလိုနဲ့ သင်္ကြန်​ ​တောင်​ ​ရောက်​​တော့မှာပဲ
ဒီနှစ်​ သင်္ကြန်​လူစည်​ဖို့တောင်​ ခပ်​ခက်​ခက်​
Shwe Ei says: -သဂျန်လူမစည်မှာတော့ တွေးမပူနဲ့ ဒညင်းဝက်ရေ..
-မန်းဒပ်ဗုံးကွဲတဲ့နှစ်တောင် အလည်အပတ် ဂလောက်ပျက်တာမှုတ်ဖူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Alinsett@Maung Thura says: ဟုတ်သား
ကျနော့် ကျေးဇူးရှင် ဆရာ ပီမိုးနင်း သူ့ကျမ်းတစ်အုပ်ထဲ ပြောတဲ့စကား အမှတ်ရမိ ဗမာတွေက စည်းစိမ်မယစ်ရရှာပဲနဲ့ အပျော်ယစ်နေကြတာ တဲ့
တခြား တိုင်းတပါးက ချမ်းသာအောင် ကြိုးစားနိုင်သွားသူတွေက
ဒို့ဗမာတွေက ပြာပုံထဲ ဘာမှမရှိပဲလည်း
အပျော်ယစ်မူးနေကြတယ် ဆိုတဲ့ စကား
Ma Ma says: ရေပက်တဲ့အလေ့အထ မြန်မာမှာပဲ ရှိတယ်လို့ အရင်ကထင်ခဲ့တာ။
တရုတ်က ပြည်နယ်တချို့၊ ထိုင်း နဲ့ လာအိုမှာလည်း သင်္ကြန်ပွဲ ကျင်းပကြတယ်ထင်တယ်။
ဒီမှာတော့ ဟိန္ဒူသင်္ကြန်က ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းက လုပ်သွားတယ်။
သူတို့နိုင်ငံနေ့ရက်နဲ့တိုက်လုပ်တာလား၊ ကြိုလုပ်တာလားတော့ မသိဘူး။
naywoon ni says: ဒီနှစ်​သင်္ကြန်​ ဘယ်​မှာသွား​ရှောင်​ရပါ့ ။
မြစပဲရိုး says: သင်္ကြန် တောင် နီးပြန်ပေါ့။
ကျွန်မလဲ အင်ဒိုနီးရှား က သင်္ကြန် ကို မသိဘူး။
အောက်ဆုံးပုံက အရုပ်ကြီး တွေ ချစ်စရာကြီး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7172
Mike says: .အင်ဒိုနီးရှား က သင်္ကြန် ကို ခုမှကြားဖူးတွေ့ဖူးတယ်..ကျေးဇူးပါ
.အရင်က အိန္တိယ နဲ့ ယိုးဒယား ပဲသင်္ကြန်ကျတယ်ကြားဖူးတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: သင်္ကြန်က.. ဟိန္ဒူတွေရဲ့ဓလေ့ပါ…။
တကယ်တော့.. မြန်မာအပါအ၀င်.. ကမ္ဘောဒီယား.။ လားအို.. ယိုးဒယား..အင်ဒိုနီးယား..။ မာလာယူတို့က.. အသောကမင်းမြေး(လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂ထောင်ကျော်) လက်ထက်လောက်ကစပြီး.. ဟိန္ဒူနိုင်ငံတွေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့…။
သရေခေတ္တရာ..။ ပျူ ခေတ်တောင်မတိုင်သေး…။
ဗမာတွေရဲ့.. မူလကိုးကွယ်ရာက.. ဂျိန်း.. ဟိန္ဒူသာသနာဖြစ်တယ်လို့.. သေချာတဲ့.. သမိုင်းသက်သေပါ..။
အောက်ဆုံး ဟိန္ဒူသာသနာပြန့်ပွားတဲ့ပုံအရ.. အသောကမင်းမြေးလက်ထက်လောက်မှာ.. သီရိလင်္ကာ နဲ့.. အခုသထုံဒေသတွေဆီ ဟိန္ဒူသာသနာဝင်ပုံပြပါတယ်..။
ဆိုတော့.. တရားတွေ.. အဌကထာတွေအရကောက်. ပြောကြည့်ရရင်.. အနော်ရထာမင်း.. သထုံကသွားပင့်လာတဲ့ ရှင်အရဟံဟာ.. ဂျိန်းဘုန်းကြီး.. ဒါမှမဟုတ်.. ဟိန္ဒူဆာဒူးဖြစ်ဖို့တော်အလားအလာများတယ်..။ =
– 320–298 BCE Chandragupta Maurya
– 298–272 BCE Bindusara
– 268–232 BCE Ashoka (Religion Hinduism later converted to Buddhism )
– 232–224 BCE Dasaratha Maurya (Religion Buddhism)
– 224–215 BCE Samprati (Religion Jainism)
– 215–202 BCE Salisuka Maurya (Religion Jainism)
– 202–195 BCE Devavarman (Religion Buddhism)
– 195–187 BCE Satadhanvan
– 187–185 BCE Brihadratha
black chaw says: အင်ဒိုနီးရှား သင်္ကြန်မှာရော ပိတောက်တွေ ပွင့်လားဗျ…။
Kyaemon says: ပုံတွေမှာပိတောက်တွေကိုတော့ မတွေ့လိုက်ပါ၊
ဒီအရပ်က စင်ကာပူနဲ့သိပ်မဝေးတော့လဲ ပိတောက်ပင်တွေရှိနိုင်တယ်
manawphyulay says: အင်ဒိုနီးရှားက သင်္ကြန်ကို ဘာလို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ မှာ လုပ်တာလဲ။ သူတို့က ပွဲတော်ကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားတာလဲ သိချင်ပါတယ်။
Kyaemon says: manawphyulay says:
အင်ဒိုနီးရှားက သင်္ကြန်ကို ဘာလို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ မှာ လုပ်တာလဲ။ သူတို့က ပွဲတော်ကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားတာလဲ သိချင်ပါတယ်။
တရုပ်နွယ်ဘွား ဒေသခံ တို့က သင်္ကြန်ကို တရုပ်နှစ်ကူးပွဲနဲ့
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အင်ဒိုနီးရှားက တရုတ်နှစ်ကူးနဲ့ရောကူးတာပေါ့။
Kyaemon says: “အင်ဒိုတရုတ်အများစုက ဘာဘာသာဝင်တွေလဲသိချင်တယ်။”
ခေါင်းပေါ်ခြုံတိုင်းအစ္စလမ်ဝင်မဟုတ်ပါ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ၉၀ % ရှိတဲ့အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံမှာ
တရုပ်အနွယ်ဘွားအနက် ၅.၄၁ % ဘဲ ရှိတယ်လို့ပြော၊ Inacountry where nearly 90 percent of the population are Muslims, the ethnic Chinese Muslims formasmall minority of the ethnic Chinese population. The 2000 census counted 5.41 percent of Chinese Indonesians were followers of Islam
ဦးကြောင်ကြီး says: ကြေးမုံးဂျီးဂဒေါ့ တရုတ်ပြည် ရှင်ကျန်းနယ်က ဝီဂါမူဆလင် ပန်းသေး၇၈၆ အကြမ်းဖက် ခွဲထွက်ရေးသမားဗာ။